Thunderstruck II က Norse ဒဏ္ဍာရီအပေါ်အခြေပြုတဲ့ slot ကဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး Microgaming ကတီထွင်နေသည်. ဒီဂိမ်းရဲ့နောင်တော် – Thunderstruck, အစဉ်အဆက်ကဖန်တီးခဲ့ကြရန်ရေပန်းအစားဆုံး slot နှစ်ခုထဲကတစ်ခုဖြစ်ပါသည်. နညျးလမျးမြား၏အတော်လေးတွေအများကြီးထဲမှာတိုးတက်အောင်စဉ် Microgaming ကနေဒီနောက်ဆက်တွဲမူရင်းဂိမ်းရဲ့အနှစ်သာရအများကြီးဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထား. The Great Hall of spins bonus round and wildstorm feature are both exciting and will keep the player on their toes. သင်တို့အပေါ်မှာဒီဂိမ်းကစားနိုင်ပါတယ် မိုဘိုင်းသိုက် slot နှစ်ခုဆိုက်.
Microgaming isaslot game developing company based out of the Isle of Man in the British Isles. ဒါဟာကျော်နှင့်အတူဗြိတိန်နိုင်ငံတစ်ဝှမ်းကာစီနိုလောင်းကစားရုံမှ slot ပါဂိမ်းများနှင့်ဆက်စပ်နည်းပညာ၏အကြီးဆုံးပံ့ပိုးပေးသူဖြစ်ပါသည် 20,000 လက်ရှိစစ်ဆင်ရေးအတွက်စက်တွေကို. သူတို့ထဲကတစ်ဦးကအများကြီးမိုဘိုင်းသိုက် slot နှစ်ခု site ပေါ်တွင်ရရှိနိုင်ပါသည်.
Thunderstruck II ကိုရှိပါတယ်သည့်အွန်လိုင်းဗီဒီယို slot ကဖြစ်ပါတယ်5ရက်ကြောင့်မှားယွင်းခြင်းနှင့် 243 paylines. မိုဘိုင်းသိုက် slot နှစ်ခု site ပေါ်တွင်ကြောင့် Play. အဆိုပါ slot ကလှည့်ဖျားနှုန်းအဖြစ်တာ 15 အဖြစ်£အဘို့ကစားနိုင်ပါတယ်. ဒီဂိမ်းအမည်တူနှင့်အတူဂန္နှင့်အများကြီးပိုဖျော်ဖြေမှုနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အတော်လေးလျော့နည်းမတည်ငြိမ်သောဖြစ်ပါသည်. အဆိုပါ Norse ဒဏ္ဍာရီဆောင်ပုဒ်အကြိုက်ဖက်ဤသို့ဒီဂိမ်းဟာအမြင်အာရုံအားရစရာအောင်ဂရပ်ဖစ်သို့ထည့်သွင်းခဲ့.
အဖြစ်ဝေးဂိမ်းကစားစဉ်းစားသည်အဖြစ်, ဒါကြောင့်အများစုအခြား slot နှစ်ခုအတွက်ကဲ့သို့ဆုကြေးငွေဂိမ်းအကြောင်းကိုပဲအားလုံးမဟုတ်ပါ. ခြေရင်းဂိမ်းသေးသေးကိုအနိုင်ပေးအများကြီးအတော်လေးမကြာခဏကြွလာတော်နှင့်အတူလုံလောက်တဲ့စိတ်ဝင်စားစရာဖြစ်ပါတယ်. ခြေရင်းဂိမ်းထဲမှာအနိုင်ရရှိခဲ့ခံရဖို့ 1000x တစ် mini ကိုထီပေါက်လည်းရှိပါသည်.
ထိုအခါကျပန်းဖြစ်ပေါ်သော Wildstorm အင်္ဂါရပ်ရှိပါတယ်. ဒီနေရာတွင်တဦးအခမဲ့လှည့်ဖျားရပေမယ့်အကြောင်းကအကောင်းဆုံးအစိတ်အပိုင်းအားလုံးငါးရက်ကြောင့်မှားယွင်းတစ်ဦးအနိုင်ရရှိလေယာဉ်ဆင်းသက်သင်တို့၏အခွင့်အလမ်းတွေကိုတိုးမြှင်ဤသို့ရိုင်းလှည့်စေခြင်းငှါအခွင့်အလမ်းလည်းမရှိကြောင်း.
လှည့်ဖျား၏မဟာခန်းမမှာအကောင်းဆုံး feature တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်. ရှိပါတယ်4ကနှင့်ဤအင်္ဂါရပ်ဆင်းသက်ခြင်းဖြင့်အစပျိုးသည်မှကွဲပြားခြားနားတဲ့အဆင့်ဆင့်3အရက်ကြောင့်မှားယွင်းအပေါ်ကြဲဖြန့်သင်္ကေတများသို့မဟုတ်ထိုထက်ပို. သငျသညျအကြားရစေခြင်းငှါ 10 သို့ 25 သင်၌ရှိကြအဆင့်ပေါ် မူတည်. ဆုကြေးငွေနှင့်အတူအခမဲ့လှည့်ခြင်းများ.
အကြဲဖြန့် မှလွဲ. အပေါငျးတို့သညျအခွားသင်္ကေတတစ်ခုအစားထိုးအဖြစ်ပြုမူသောရိုင်းသင်္ကေတလည်းဖြစ်ပါတယ်.
ဒါကြောင့်, မိုဘိုင်းသိုက် slot နှစ်ခု site ပေါ်တွင်စတင်ရန်.
ဤ ၎င်း၏ယခင်ကဲ့သို့အလွန်ရေပန်းစား slot ကဂိမ်းခဲ့. အဆိုပါဂိမ်းပိုက်ဆံအိတ်အပေါ်စျေးပေါသော်လည်းတစ်ချိန်တည်းမှာတကယ်ကောင်းစွာထုတ်ပေးဆောင်. ဒီ slot ကအရမ်းကြီးကျယ်ခမ်းနားပါတယ်အဘယ်ကြောင့်ဒီအဖြစ်ကောင်းဖြစ်ပါသည်. မိုဘိုင်းသိုက် slot နှစ်ခု site ကိုမှ Get နှင့်ချည်ငင်စတင်.
မိုဘိုင်းအပ်နှံ slot Fruity ထိုအခါအရည်ရွှမ်းအားကစားပြိုင်ပွဲ
Coinfalls မိုဘိုင်း slot မှာဖုန်းနံပါတ်အသီး slot ဂိမ်း
ဘဏ်လုပ်ငန်း | ဖုန်းနှင့်ပိုမိုအားဖြင့်ကာစီနို Pay ကို!